चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीलाई दिदी मान्दै आएका र्यापर भिटेनले मासु बोकेर प्रियंकालाई भेट्न गए. – Dailny NpNews
चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीलाई दिदी मान्दै आएका र्यापर भिटेनले मासु बोकेर प्रियंकालाई भेट्न गए.
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र १०, २०७८ समय: ११:४८:२६
चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीलाई दिदी मान्दै आएका र्यापर भिटेनले सुँगुरको मासु बोकेर प्रियंकालाई भेट्न गए, प्रियंकाकी छोरीलाई भिटेनले दिएको उपहार देखेर प्रियंका र आयुष्मान दुवै दंग, भटिेनले खुलाए अहिलेसम्म बाहिर नआएको रहस्य, बंगुरको मासुको गन्ध आएपछि प्रियंकाले भोमिट गरिन्, भिडियो भाइरल
निर्मल प्रधान भन्छन् “ठूला लगानीकर्ताले अप्राकृतिक माग सिर्जना गरिदिएर ग्याम्लिङ गरिरहेका छन्” सुवास निरौला ठूला लगानीकर्ताहरूले दोस्रो बजारमा अप्राकृतिक माग सिर्जना गराइदिएर बजारलाई डेन्जर जोन तर्फ धकेलिरहेको आरोप स्वयम् ठूला लगानीकर्ताहरूले लगाउन थालेका छन्।सहज ढङ्गले चल्नु पर्ने बजारलाई असहज तरिकाले चलाउन खोजिरहेको आरोप स्वयम् बजारले अहिलेसम्म मान्दै आएका ठूला लगानीकर्ताहरू नै लगाउन थालेका हुन्।
बजारमा ठूला लगानीकर्ता भनेर चिनिएका लगानीकर्ताले आफू भन्दा ठूला लगानीकर्ताहरूले बजारलाई असहज पारिरहेको आरोप लगाउँदा शेयर बजारमा निक्कै ठूला लगानीकर्ता हाबी हुन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ। दैनिक कारोबार रकम बढेर २१ अर्ब भन्दा माथि पुग्न थालेपछि ठूला लगानीकर्ताले समेत आफूलाई सानो मान्नु पर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको बुझ्न सकिन्छ।
शेयर बजारमा लामो समयदेखि कारोबार गर्दै आएका र अर्बाै रुपैयाँको शेयर ऋण चलाएको अनुभव बोकेका ठूला लगानीकर्ता निर्मल प्रधानले समेत ठूला लगानीकर्ताले अप्राकृतिक माग सिर्जना गरेको भनेपछि साना लगानीकर्ताको परिभाषा आगामी दिनमा परिवर्तन गर्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ। “शेयर बजार जुन रुपमा जसरी चल्नु पर्ने हो त्यसरी नचलिकन यति बेला बजारलाई चलाइएको छ। सहज ढङ्गबाट चल्नु पर्ने बजारलाई ठूला लगानीकर्ताहरूको समूह मिलेर ग्याम्लिङ गरिरहेका छन्। अप्राकृतिक माग सिर्जना गरिदिने लगानीकर्ताहरू हाबी भएको महसुस मैले गरिरहेको छु” प्रधानले मेरो लगानीसँग भने।
पछिल्लो समय बढिरहेको बजारमा वाणिज्य बैंकको शेयरको मूल्य नबढ्नु तर लाभांश क्षमता नै नभएका कम्पनीहरूको मूल्य बढ्दै जानुले बजारमा ग्याम्लिङ भइरहेको प्रधानको जिकिर छ। “शेयर बजारमा सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र मानिएका वाणिज्य बैंकहरूको शेयर मूल्य नबढ्ने तर फाइनान्स, डेभलपमेन्ट बैंक र हाइड्रोका शेयर अचाक्ली बढिरहेको छ। खास यी सेक्टरको मूल्य यसरी बढ्नु भनेको नै उनीहरूको शेयर सङ्ख्या कम हुनु हो।
शेयर सङ्ख्या कम भएका कम्पनीहरूको शेयरमा अप्राकृतिक तरिकाले माग देखाउनेहरूलाई यति बेला सहज जस्तो देखिन्छ। यति बेला केही समूहले मिलेर आज हाइड्रोलाई बढाअाैं भनेर अप्राकृतिक माग सिर्जना गराइदिने गरेका छन् भने कहिले फाइनान्समा । बजार अप्राकृतिक माग कै कारण बढिरहेको देखिन्छ। एकै दिनमा ८/१० प्रतिशत वृद्धि हुने अनि फेरि त्यति नै प्रतिशत घटेको पनि देखिन्छ। यस्तो खालको काम हुँदा त बजार डेन्जर भएन र ?” प्रधानले उल्टै प्रश्न गरे।
समूह बनाएर शेयर कर्नरिङ गर्नेहरूले साना पूँजी भएकालाई मात्रै टार्गेट गर्ने गरेको र वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी बढी भएकोले उनीहरू वाणिज्य बैंकको शेयरमा हाबी हुन नसकेको प्रधानको ठम्याई छ। बजारमा एकथरी लगानीकर्ताले समूह बनाएर कर्नरिङ गर्ने र अर्काे थरी लगानीकर्ता त्यसैमा रमाउँदै गएकोमा चिन्ता लागेको प्रधानले बताएका छन्। उनी भन्छन् “जुन तरिकाले बजार स्वच्छ तरिकाले चल्नु पर्ने हो।
त्यो तरिकाले चलेको जस्तो मलाइ लागेको छैन। फेरि यस्तो भन्नुको अर्थ गैर कानुनी क्रियाकलापले ठाउँ लियो भन्ने पनि होइन। किनकि उनीहरूले कानुनी रूपमै शेयर कुन किन्ने र कुन बेच्ने भन्ने अधिकार राख्छन्। उनीहरूलाई मापदण्ड भित्र रहेर जुनसुकै शेयर किनबेच गर्ने अधिकार छ। तर चिन्ताको विषय के हो भने जुन किसिमको माग सिर्जना गराउने समूहले चलखेल गर्न खोजिरहेको छ। उनीहरूको लहै लहैमा बजार लागेकाे छ।”
मौद्रिक नीतिले १२ करोडको क्याप लगाएपछि बजारमा ठुलो मात्रामा सेल आउन सक्ने सम्भावना रहेको र उक्त सेल प्रेसरलाई १२ करोडकै नीतिले नै वायर आउन वञ्चित पार्ने भएकोले आउने दिनमा शेयर बजार जसरी बढिरहेको थियो त्यसरी नै बढिरहन सहज परिस्थिति नहुने उनको अनुमान छ। “मौद्रिक नीतिले १२ करोडको सीमा लगाएको छ। त्यसको असरले बजारमा शेयर सेलिङको प्रेसर आउने प्रशस्त सम्भावना देखेको छु। किनकि जसरी सेल आउँछ त्यसलाई पचाउने क्यपिसिटि भएका वायर बजारमा हुने छैनन्। किनकि केन्द्रीय बैंकको सीमा शेयर किन्नेलाई पनि लाग्छ। त्यसैले बाइङ क्यापेसिटि पनि घटाइ दिन्छ भनेको हो। यस्तो अवस्थामा साना लगानीकर्ताले बजारलाई कति दिन थेग्न सक्लान् ? प्रधानले भने।